VISA and Immigrant Resources - Somali Language - CityAttorney | seattle.gov
Xafiiska Qareenka Magaalada Seattle waxa uu ballan ku qaadayaa ilaalinta iyo u adeegida dhammaan dhibanayaasha dembiga, iyaddoon loo eegin heerkooda muwaadinimada, caddaymaha ama kartida luqadda. Waa Magaalada Seattle xeerkeeda inaanay u baahan qof kasta oo raadinaya adeegyada si loogu shaaciyo sharcigooda socdaalka.
Ku saabsan VISA ee Dhibanayaasha Socdaalka ee Dembiga
Haddii aad tahay dhibanaha dembiga, waxaad u qalmi kartaa fiisayaasha socdaalka qaarkood oo loogu yeedho fiisayaasha U ama T, Fiisayaashan waxay ka ilaalinayaan dhibanayaasha dembiyada qaarkood kuwaas oo aad u caawiyay sharci fulinta baadhitaankii dembiyadaas. T-visas waxa uu bixiyaa dheefaha socdaalka ee dhibanayaasha ka ganacsiga dadka. U iyo T visas labbaduba waxay bixin karaan:
• Sharciga socdaalka ee ku meel gaadhka ah
• Helida oggolaanshaha shaqada.
• Fursada lagu codsanayo deganaansho joogta ah (loo yaqaano sida kaadhka cagaaran) ee fiisaha dadka haysta iyo xubnaha qoyskooda.
• Helida caawimada lacagta caddaanka ah, Medicaid, lambarka Amniga Bulshada, liisanka darawalka, iyo dheefaha kala duwan ee dad waynaha.
Baro waxbadan oo ku saabsanU Visas
Baro waxbadan oo ku saabsanT Visas
Iyaddoo ay caddahay halista isbeddel kasta oo sharcigaaga socdaalka ah, waxaanu soo jeedinaynaa inaad la tashato qareenka socdaalka ka hor inta aanad codsan wax fiisooyin ah
(eeg hoos wixii taageerada sharciga ah).
In la CodsadoIn la codsado fiisa U ama T , waa inaad heshaa foomka caddaynta sharci fulinta saxeexan ee ka soo baxday wakaalada sharci fulinta halka dembigu ka dhacay. Foomka caddaynta waxa uu sheegaa inaad la shaqaysay baadhitaanka sharci fulinta. Foomkan caddaynta sharci fulinta waxaa ka dib lala soo gudbin karaa codsiga Fiisaha U ama T Muwaadinada Maraykanka iyo Adeegyada Socdaalka (USCIS) si loo habbeeyo. Wixii ah U-Visas foomkan caddaynta sharci fulinta waa USCIS foomkaI-918 Kaabbida B, iyo wixii ah T-Visas foomkan waa USCIS foomka I-914 Kaabbida B.
Waaxda Booliska Seattle iyo Xafiiska Qareenka Magaalada Seattle waa wakaaladaha sharci fulinta sharciga kuu caddayn kara (saxeexa) foomamkan adiga. Wakaalada sharci fulinta waa inay aqbashaa inaad ka qayb gashay baadhitaanka dembiga. Xafiiska Qareenka Magaalada Seattle iyo Waaxda Booliska Seattle waajib sharci ah kuma aha inay soo gebagebeeyaan bayaanka. USCIS waxay gaadhaa go'aanka u dambeeya ee siinta Fiisaha. Caddayntu si toos ah uma siiso dheefaha socdaalka. Iyaddoon lahayn caddaynta sharci fulinta, si kastaba ha ahaatee U-Visa waa la diidi doonaa. Haddii aad tahay dhibanaha dembiga ka dhacay gudaha magaalada Seattle oo aad u baahan tahay caddaynta sharci fulinta la dhammaystiray ee saxeexan, fadlan iimayl ku soo dir foomka la buuxiyay:
CityAttorneyVisaCertifications@seattle.gov ama iimayl u soo dir (Kormeeraha Qaybta Rabshada Guriga) Domestic Violence Unit Supervisor, 701 5th Ave, Ste 2050, Seattle, WA 98104
Luqaadda iyo Taageerada Sharciga
Haddii aad u baahan tahay caawimada luqadda kale, Xafiiska Qareenka Magaalada waxa uu leeyahay qareeno ku hadla Isbaanishka, Fiidnaamiiska, iyo Shiinaha. Turjubaanada luqaddaha kale sidoo kale waa la heli karaa.
Wixii ah caawimada U-Visa ama T-Visa nidaamka codsiga waxaad la xidhiidhi kartaa Mashruuca Xuquuqaha Qofka Muhaajirka ah ee Waqooyi galbeed. Ka eeg websaydka faahfaahintooda: https://www.nwirp.org/get-help/.
ilaha laanta socdaalka
Nabada Gudaha Guriga Khadka caawimada 1 (888) 847-7205
waxay ku xidhaa wacayaasha qareen ku hadlo luqaddooda. Tani waa nidaam otomaatig ah, markaas sug ilaa aad maqasho luqaddaada lagu hadlay oo dooro luqadda. Luqaddaha Af Xabashi, Shiine, Jabaaniis, Khumeer, Low, Ruushiyaan, Roomaaniyaan, Soomaali, Isbaanish, Tagalog, Thai, Tigranya, Yuukreeniyaan, iyo Fiidnaamiis.
Si loo ogaado haddii uu qof ku jiro ilaalinta socdaalka ah:https://locator.ice.gov/odls/homePage.do
Laanta Socdaalka iyo Dhagan gelinta Kastamada Garo Xuquuqdaada:https://www.nwirp.org/resources/kyr/
Caawimada Dhaqaale ee Dadka Muhaajiriinta ah:
Kani waa linkiga noocyada caawimada dhaqaalaha ee loo heli karo WA iyo gobolada kale ee muhaajiriinta:
Taageerooyinka Seattle ee Bulshooyinkeena Muhaajirka
Gudaha Febraayo 2017, Gollaha Magaalada Seattle si wada jir ah waxa uu u ansixiyay Qaraarka 31730 xaqiijinaya Seattle sidii magaalada soo dhawaynaysa muhaajiriinta iyo qaxootiga. Gudaha Oktoobar isla sanad isku mid ah, Gollaha Magaalada Seattle si wada jir ah waxa uu u ansixiyay Qaraarka 31775 "xaqiijinaya taageerada Magaalada ee muhaajiriinta iyo markhaatiyada qaxootiga, samata baxayaasha iyo dhibanayaasha dembiga." Gudaha 2018, gobolka Washington waxa uu ansixiyay SHB 1022 kaas oo u baahan tababar midaysan iyo jawaabo qaybta wakaaladaha sharci fulinta ee codsiyada dhibanayaasha foomamka caddaynta sharci fulinta ee Fiisayaasha U iyo T.